पर्यटनमन्त्री भट्टराईले अस्ट्रेलियामा गरे देशकै बे’इज्जत, प्रहरीले गरे हस्तक्षे’प – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पर्यटनमन्त्री भट्टराईले अस्ट्रेलियामा गरे देशकै बे’इज्जत, प्रहरीले गरे हस्तक्षे’प
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले अस्ट्रेलियामा गरे देशकै बे’इज्जत, प्रहरीले गरे हस्तक्षे’प
833 Less thanaminute
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार गर्न अस्ट्रेलिया पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशकै बे’इज्जत गरेका छन् । भ्रमण वर्ष प्रचार प्रसार गर्न सिडनीको सडकमा निकाल्न लागिएको र्‍याली स्थानीय प्रहरीले रोकिदिएको छ ।
र्याली निकाल्न स्वीकृति नदिएको भन्दै प्रहरीले रोकिदिएको हो । यो विषयबारे अस्ट्रेलियाका मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको बे’इज्जत भएको छ । सिड्नी काउन्सिलले र्याली निकाल्न दुई दिनअघि नै अनुमति दिएको थिएन ।
तर, पनि मन्त्री भट्टराईको जोडमा निकालिएपछि प्रहरीले रोकिदिएको हो । जु’लुसमा पर्यटनमन्त्री भट्टराई, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाल, काउन्सिल जनरल दीपक खड्कासहित नेपालीहरूको सहभागिता थियो ।
अष्ट्रेलिया अहिले शाे’कमा परेकाे छ । डँडेलोले ठूलो क्ष’ति भएर शो’कमा परेको अष्ट्रेलियामा भ्रमण वर्षको र्‍याली निकाल्न खोजेर मुलुककै बे’इज्जत हुने कार्य भएको छ । मन्त्री भट्टराईलाई वि’वादमा ल्याउने गरि भ्रमण वर्षको कार्यक्रम राखिएको देखिएको भन्दै अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुले आ’पत्ति जनाएका छन् ।
भारतीय चर्चित अभिनेता ऋषी कपूरको पाकिस्तानमा रहेको ऐतिहाँसिक हभेली भत्काउन पाकिस्तानीहरुको चलखेल !
चीनमै दुई यात्रु झारेर किन माध्यरात उड्यो हिमालय एयरलाइन्सको विमान ?
कोरोनाको भयले नेपाली समाजको मेरुदण्डमा नै प्रहार गर्दै, समूहमा रम्ने समाज निरीह बन्दै (भिडियो)
समुदायस्तरमा कोरोना देदिएपछि सप्तरीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी
सूर्यग्रहणः धनु राशिका लागि अतिकष्ट, कुन राशिका लागि कस्तो फल मिल्ने ?